XALKA SHAQADA BIRTA
17 Sano Khibrad Soosaarid
Mashiinka Xardho CO2 Laser
Shear Haydarooliga Guillotine
Nooca Furan Mashiinka Birta Fiber Laser Goynta
Sheet Birta Oo Tube Fiber Laser Goynta Machine Fro ...
1390 1610 100W 150W CO2 Laser xardho iyo Goynta ...
KML-FC Full xiran Fiber Laser Mashiinka Calaamadaha Iyadoo ...
Shiinaha 1530 Mashiinka Goynta Hyperthern CNC Plamsa
100W 200W Mashiinka Nadiifinta Fiber Laser
Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka 'Robotic CNC plasma' ...
H dogobka beenta Been Automatic H dogobka goynta ...
KF6015 Auto Focus Fiber Laser magaabay
KF6015 fiber laser magaabay waxaa badanaa loo isticmaalaa biraha saxan goynta. 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW, 4KW iyo 6KW awood laser waa la heli karaa, Aagga goynta sidoo kale waa la habeeyay .
1325 Birta iyo Nonmetal CO2 Laser Goynta Machine
Qaab No.: KCL1325XM
KCL1325XM biraha iyo nonmetal CO2 laser goynta mashiinka waxay leeyihiin awood kala duwan, 150W waxay jari kartaa birta birta ah iyo birta max1.5mm, 1.2mm ahama, 20mm acrylic iyo qoryaha 12mm iwm, sidoo kale waxay ku xardhan karaan muraayad, akrilik, alwaax iyo waxyaabo kale oo aan isku mid ahayn; 300W wuxuu jarin karaa ugu badnaan 3mm steel steel iyo birta, 2mm ahama, 30mm acrylic iyo 20mm wood, MDF iwm, sidoo kale wuxuu ku xardhan karaa biraha aan birta ahayn.
Rollerbed Large CNC tuuboyinka Goynta Beveling Machine Waayo, steel
Mashiinka Mashiinka Beveling Goynta Ballaca CNC ayaa loogu talagalay in lagu farsameeyo dhuumaha birta weyn. Badanaa waxaa loo isticmaalaa jarista, Beveling, Samaynta godadka, Tilmaamaha, iwm, Falanqaynta kaladuwan ayaa lagu samayn karaa mashiinkan isla waqtigaas. Waxay ka baaraandegi kartaa birta kaarboon, birta aan caadiga ahayn iyo walxaha kale ee birta ah, oo si ballaaran loogu adeegsado dhuumaha maraakiibta cadaadiska, saliidda iyo ka shaqeynta dhuumaha gaaska, qaab dhismeedka shabakadda, qaab dhismeedka birta, injineernimada badda, injineernimada badda, maraakiibta iyo warshadaha kale.
KML-FC Mashiinka Calaamadeynta Fiber Laser Buuxda Oo Xiran Oo Leh Dabool
Qaab No.: KML-FC
Mashiinka calaamadeynta laser-ka ee fiber-ka KML-FC waa xalka ugu fiican ee adeegsiga ganacsiga iyo warshadaha si loogu abuuro calaamado aqoonsi joogto ah qeyb ama wax soo saar. Sida astaanta shirkadda, lambarka wax soo saarka, lambarka taariikhda, nambarka taxan, lambarka barcode ets. Waxaa loogu talagalay inay calaamadeyso ku dhowaad dhammaan noocyada birta oo ay ku jiraan birta birta ah, aluminium, birta aaladda, naxaasta, titanium, iwm. caagag badan iyo dhoobada qaar. Xawaareheeda xardhan ee dhakhsaha badan ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto noocyo calaamado kala duwan ah waqti aan dheerayn!
Qaab No.: KC-M
Mashiinka nadiifinta laser-ka ee fiber-ka KC-M waa jiil cusub oo ka mid ah alaabada nadiifinta oogada sare. Way fududahay in la rakibo, la xakameeyo, lana hirgeliyo otomaatiga. Hawl fudud, beddelka korontada, fur qalabka, ka dib waxaa lagu gaari karaa nadiifinta iyada oo aan lahayn kiimiko, dhexdhexaad iyo biyo dhaqid, waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ah hagaajinta diiradda gacanta, nadiifinta dusha sare, nadaafadda dusha sare ee nadiifinta, sidoo kale way ka saari kartaa dusha sare ee xarkaha, dufanka, wasakhda, wasakhda, miridhku, dusha, rinjiga walxaha.
Mashiinka la qaadan karo ee yar yar ee looxa looxa ee loo yaqaan "CO2 Laser Going Machine"
Qaab No.: KCL6090X
Mashiinka xardho laser-ka yar yar ee KCL6090X CO2 wuxuu jari karaa acrylic, wood, MDF, plywood, maqaar, maro iyo caaga PVC iwm, sidoo kale wuxuu ku xardhi karaa quraaradaha, acrylic, wood and other nonmetal. Aagga goynta ama xardho waa 600 * 900mm ama 600 * 1000mm.
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Goynta Mashiinka Mashiinka
Qaab No.: KP6020
Aaladda sare ee KP6020 mashiinka jarjarada leysarka fiber-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa xaashi qaro weyn. 1000 watt, 1500 watt, 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt, 6000 watt, 8000 watt, 12KW, 15KW, 20KW waa ikhtiyaari. Ku qalabaysan leysar awood sare leh, waxay samayn kartaa awood sare iyo goyn wax ku ool ah oo sare, oo ku haboon saxanka birta dhexdhexaad iyo culus. Cadaadis adag oo adag oo lagu dhejiyo aluminium aluminium ah, waxay ogaan kartaa xawaare sare. HD la socodka, 360 ° oo aan lahayn geeska indhoolaha, kormeerka waqtiga-dhabta ah ayaa xaqiijin kara amniga.
1000W 1500W 2000W Sheet Yar Bir Fiber Laser magaabay
Qaab No.: KP1390
KP1390 xaashiyaha yar yar ee birta ah ee laser-ka ah ayaa badanaa loo isticmaalaa xaashida birta ee yar yar. 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W waa ikhtiyaari. Qaab dhismeedka bannaanka ayaa si wax ku ool ah loo adeegsadaa, aagga goynta waa 1300 * 900mm, 600 * 600mm ama kuwa kale, keydinta booska iyo ilaha, qalabka si dabacsan ayaa loogu dhaqaajin karaa. Degganaansho xoog leh, saxnaan sare, 20 sano oo aan lahayn isbeddel.
Carbon ahama Steel Fiber Laser magaabay wiil Iyadoo Miiska la beddelay
Qaab No.: KE3015
KF3015 mashiinka goynta leysarka makiinada mashiinka laysku weydaarsaday waa labo dhufto, badal deg deg ah, waxtarka goynta sare.
Labada dhinac ee looxa lixda ah waxay xaqiijin karaan guud ahaan dejinta, xasilloon. Caawinta fog ee WIFI waxay ku ogaan kartaa cilad bixinta waqtiga.
Sheet Birta Oo Tube Fiber Laser Goynta Machine From Shiinaha
Qaab No.: KF3015T
KF3015T sheet biraha iyo mashiinka goynta leysarka fiber fiberka ayaa inta badan loo isticmaalaa xaashida birta iyo goynta tuubada. 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W iyo 6000W waxay noqon karaan xulasho. Iyada oo qiimaha warshad iyo 3 sano damaanad ah.
1390 1610 100W 150W CO2 Laser xardho Iyo Mashiinka Jarida
Qaab No.: KCL1390X
Mashiinka xardho laser-ka KCL1390X CO2 wuxuu jari karaa acrylic, wood, MDF, plywood, maqaar, maro iyo caaga PVC iwm, sidoo kale wuxuu ku xardhan karaa galaaska, acrylic, wood and other nonmetal.
Mashiinka Calaamadaha Laser KML-UT UV
Qaab No.: KML-UT
Mashiinka laser-ka ee lagu xardho KML-UT UV waa adeegsi tamar oo hooseeya, bey’adeedna aan u fiicnayn, isla markaana aan lahayn wax la isticmaali karo. Wax yar oo saameyn ku leh aagga, saameyn kuleylka ma leh, iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin. Badanaa waxaa loo isticmaalaa calaamadeynta caag ama dhalooyinka iwm
Waxaan hiigsaneynaa inaan siino tikniyoolajiyad muhiim ah iyo xalalka is-dhexgalka ee loo habeeyay Warshadaha 4.0 iyo warshadaha caqliga badan, ka caawinta shirkadaha inay si fiican uga faa'iideystaan ​​fursadaha badan ee ka dhashay da'da casriga.
2-804, wadada Fenghuang, Jinan, Shandong, Shiinaha